Ungakanani umxholo okhutshiweyo kwi-Intanethi kwii-60 Seconds? | Martech Zone
uninzi usenokuba uqaphele isuntswana lokuphumla ekuthumeleni kwam kutsha nje. Ngelixa ukupapasha mihla le kuyinxalenye yeDNA yam kule minyaka idlulileyo, ndikwacelwa umngeni ngokuqhubela phambili indawo kunye nokubonelela ngakumbi nangakumbi ngeempawu. Izolo, umzekelo, ndiqhubekile neprojekthi yokudibanisa izindululo ezifanelekileyo zephepha elimhlophe kule ndawo. Yiprojekthi endiyenzileyo malunga nonyaka odlulileyo kwaye ke ndithathe ixesha lam lokubhala ndaliguqula laba lixesha lokufaka iikhowudi.
Ingaba ubundikhumbula? Uninzi alunakuba… kukho itoni yezixhobo phaya epapasha umxholo omangalisayo. Andikho phantsi kwayo nayiphi na inkohliso yokuba ndigqame njengeyona ilungileyo- ndiyakuthanda ukwabelana ngezinto endizifumeneyo kunye nokunceda ekufundiseni abo babhalisile kwaye balandele ibhlog yam ukuze baqhubeke nokubonelela ngezixhobo kunye nolwazi kwi-intanethi endiyifumeneyo, uphando , kwaye ufunde malunga.
Oko kwathethi, ivolumu yengxolo evelisiweyo imane isithulu… kwaye ayisiba ngcono. Abantu kwi UMoz wenze uhlalutyo olunzulu lomxholo kunye neBuzzSumo ndafumana:
Uninzi lwabantu Izithuba ezinxulumene neshishini epapashiweyo ifumana izabelo ezimbalwa kunye namakhonkco ambalwa, ubuncinci kunonxibelelwano olu-2 kuFacebook.
Ngaphezu kwesiqingatha sazo zonke Iitweets ezinxulumene neshishini inezabelo ezili-11 okanye ezimbalwa. Ndiqinisekile ukuba ezinye zezinto zibangelwa kukuziphatha kwabasebenzisi be-Twitter, kodwa isalatha kwimizamo ngaphandle kokubuya ziinkampani.
Ngaphezulu kwe-75% yezithuba zeshishini ebenazo zero amakhonkco angaphandle Ke ukuba injongo ibikukufaka uphando lwezinto eziphilayo… uninzi lweshishini lusilele kalusizi ekufumaneni i-organic traffic.
Ama-85% omxholo obhaliweyo unamagama angaphantsi kwamawaka ali-1,000 nangona ngaphezu kwamagama ayi-1,000 XNUMX uhlala ufumana izabelo ezininzi kunye namakhonkco.
Ityala lomxholo ongaphantsi
Ebutsheni balo nyaka, sisungule iqhinga elikwi-intanethi ukulungiselela a abalawuli berhorho inkampani apha e-Indianapolis. Isicwangciso sabo sangaphambili yayilixesha elidlulileyo lemimandla emininzi kunye namawaka angaphakathi, amaphepha anegama eliphambili. Yayingumatshini womxholo obaleke iinyanga ukuzama ukukhohlisa ii-algorithms… kwaye ayisebenzi. Indawo yaxhuma kwizikhundla kwaye yawela kwinqanaba apho inokufumaneka khona kwisalathiso.
Sivavanye zonke iinkampani zommandla kunye nayo nayiphi na into enxulumene noko abayivelisileyo kwi-intanethi ukufezekisa amanqanaba aphezulu kumthengi wethu omtsha. Sifumene inyani yomxholo phaya-kodwa bambalwa kakhulu amaphepha abalulekileyo okanye aneenkcukacha. Endaweni yokongeza kwingxolo, senze uphando ngesihloko esinye ngexesha kwaye savelisa umxholo wethala leencwadi izinambuzane Oko kwakubhalwe ngokuhlekisa, kubandakanya iitoni ezibonakalayo, kwaye saqala ukuvelisa ii-infographics kunye noluhlu lokutshekisha kwisiza.
Isiphumo kukuba, kwiinyanga ezimbalwa, indawo ilawula ubungakanani. Kwakungumsebenzi onzima kakhulu kwaye umxholo wawusitya ixesha kwaye ubiza… kodwa iziphumo kukuba uyasebenza. Ngaphantsi Umxholo unokuvelisa mkhulu Iziphumo zeshishini xa kufakwa umgudu kuwo.
Njengoko ujonge kule infographic kwaye ubona imeko yokuyilwa komxholo ngaphakathi komzuzu omnye kwiwebhu kule minyaka imbalwa idlulileyo, kukho ithuba elimangalisayo. Veza umxholo omangalisayo kunye neyakho Umxholo uya kuba ngukumkani phakathi kweepawuni.
Imizuzwana yethu 'ye-60' infographic ibonakalisa okwenzekayo ngomzuzu nje omnye kwiwebhu. Inani lokukhangelwa kuGoogle, iiposti zikaFacebook kunye nemiyalezo ye-WhatsApp ethunyelwe kwimizuzwana engama-60 iyamangalisa ngokwenene! Ukupapashwa okokuqala kunyaka ophelileyo, ngoku siyihlaziyile ngo-2017, kubonisa amanani kule minyaka mithathu idlulileyo. URobert Allen, Ukuqonda okuSmart.
Kwenzeka ntoni kwi-Intanethi kuMzuzu omnye?
tags: 20142015201660 imizuzwanaumxholo wenziweumxholo womxholoivolumu ye-imeyile ngonyakaemailii-imeyile ezithunyelwe ngomzuzu omnyeFacebookIzithuba ze-facebookUphando lukaGoogle ngomzuzuiiyure zomxholokwi-infographicinstagram ngomzuzuLinkedInimiyalezo ithunyelweumzuzu omnyeizithuba ezipapashiweyoImidiya yokuncokolaizibaloii-imeyile zizonke zithunyelwetweets ngomzuzuTwitterilayishwewhatsappisibalo samagamaIzithuba zegamayoutube
Uyakha njani iiKhonkco zoPhononongo zikaGoogle, iBing, Yelp, kunye nokuninzi…